Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Fiji » Fiji na -akwali imepe njem nlegharị anya na Disemba 2021
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Fiji • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla na -ewetara Fiji otu nzọ ụkwụ ka ọ nwee ike ịnabata ndị ọbịa mba ọzọ n'agwaetiti ndị ahụ.
Ihe karịrị 92% nke ndị bi na Fiji nwetara ọgwụ izizi nke COVID-19.
Njem nlegharị anya nke Fiji na -ewepụta atụmatụ obodo ọhụrụ iji gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa ume.
Industrylọ ọrụ njem nlegharị anya nke Fiji anabatala Nlekọta Fiji Nlekọta.
N'ihe karịrị 92% nke ndị ebumnobi ha na-enweta ọgwụ mbụ nke ọgwụ COVID-19 yana ihe karịrị 41% nwere ọgwụ mgbochi ugbu a, Fiji na-enwe ọganihu dị ukwuu na ebumnuche ya ịmalitegharị ọzọ na Disemba 2021, ebe ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla na-eweta Fiji otu nzọụkwụ nso ịdị nso. nwee ike ịnabata ndị ọbịa mba ofesi ọzọ n'agwaetiti ndị ahụ.
Onye Minista Azụmaahịa, Azụmaahịa, Njem Nleta na Ụgbọ njem, Hon. Faiyaz Koya. "Ịgba ọgwụ mgbochi ndị mmadụ n'ịnyere ọ bụghị naanị na -eme ka anyị chekwaa obodo anyị, kamakwa na anyị dị njikere ịnabataghachi ụwa n'ikpere mmiri anyị ma mee ka ndị Fiji laghachi n'ọrụ ha hụrụ n'anya."
Dị ka akụkụ nke nkwadebe maka imepe Fiji ọzọ, Njem nleta Fiji ewepụtala atụmatụ ime obodo ọhụrụ iji gbaa ndị Fiji niile ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma dịrị njikere maka njem ịmaliteghachi mgbe ebuliri ihe mgbochi. Ọ bụ ozi dị mfe, mana nke dị mkpa: "Ọ bụ mgbọ kacha mma anyị na njem: gbaa ọgwụ mgbochi ma jikere." Mgbasa ozi a na -esonye na ozi njem nlegharị anya Australia ịkekọrịta otu nkwado na agbamume maka ịgba ọgwụ mgbochi n'ofe Fiji.
Iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị njem na ndị obodo nọ n'oke ala na -emepe, Industrylọ ọrụ njem nlegharị anya nke Fiji emeela ọtụtụ nkwa Nlekọta Fiji; Ụkpụrụ ahụike na nchekwa nchekwa nke WHO kwadoro nke ọma ka emebere ka ụlọ ọrụ ahụ kwekọọ n'ụkpụrụ njem nchekwa na ụwa mgbe COVID gasịrị. Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na -agba mbọ ime ka ndị ọrụ ruru eru gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa 100%, ha ga -enwetakwa CFC 100% Vaccination Stamp ozugbo emechara ya. Ka ọ dị ugbu a, enwere ebe ntụrụndụ Fiji 46 nke nwetara ọgwụ mgbochi 100% nke ndị ọrụ ha.
Ọzọkwa, Njem Nleta Fiji North America amalitela mkpọsa ahịa mmekọrịta, akpọrọ "Chọta Bula gị" iji gbaa ndị na -azụ ahịa ume ịmalite nrọ na ịhazi njem ha zuru oke na Fiji. Mgbasa ozi a gbadoro anya n'ajụjụ iji nyere ndị njem aka ịchọta 'Bula' ha ma nata ndụmọdụ njem nke dabara na mmasị ha. Mgbasa ozi a na -amalite site na ekele "bula" nke Fijian - okwu nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara gụnyere kele, obi ụtọ, ahụike na ume ndụ.